Manadalay Daily Newspaper – Page 4
၂၅-၁၂-၂၀၁၈ ထုတ် မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာပါ
☺ ဘုရား –
ဖူးမြော်မ၀ မြတ်ဗုဒ္ဓ ။
☺ တရား –
သစ္စာလေးပါး မြတ်တရား ။
☺ သံဃာ –
ဓမ္မရာဇာ မြတ်သံဃာ ။
☺ မိဘ –
ရင်၌ လွယ်ဖွား သားသမီးကို
တုယှဉ်မရ မြတ်မိဘ ။
☺ ဆရာ –
ဖွင့်အံသင်တာ မြတ်ဆရာ ။
☺ ဘုရား – – – တရား – – – သံဃာများနှင့်
မိဘ ဆရာ ဤငါးဖြာအား
အေးမြသာယာ ဖြစ်စေသတည်း ။ ။
Posted on 26/12/2018 Author AuthorCategories ကဗျာLeaveacomment on ကဗျာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ကလေးသူငယ်များ၏ စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲမှု တစ်ရက်လျှင် ၇ နာရီ ကျော်သည်အထိ မြင့်တက်ရောက်ရှိလာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ကလေးသူငယ်များ၏ စမတ်ဖုန်း သုံးစွဲမှုပမာဏသည် တစ်ရက်လျှင် ၇ နာရီကျော်သည်အထိ မြင့်တက်ရောက်ရှိလာနေကြောင်း အမျိုးသား ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက အတည်ပြုထားသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းက စမတ်ဖုန်းများ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆန်းစစ်လေ့လာရာမှ ကလေးသူငယ်များ ဖုန်းသုံးစွဲသော အချိန် ပမာဏကို တွက်ချက်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးသူငယ်များအနေဖြင့် လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား စသည့် နည်းပညာ ထုတ်ကုန်များကို တိုးမြှင့်အသုံးပြုလာသည့်အလျောက် ၄င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အမှန်တကယ် ထိတွေ့သင်ယူလေ့လာရသောအချိန်သည် တစ်ရက်လျှင် ၂ နာရီမျှသာ ကြာမြင့် လာကြောင်း သုတေသီတစ်ဦးက ထောက်ပြသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ၄င်းတို့၏ စမတ်ဖုန်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ချိန်ကို လျှော့ချပြီး ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့ချိန်ကို မိဘများဘက်မှ ဂရုစိုက်ပြီး ဟန်ချက်ညီအောင် တိုးမြှင့်ပေးသင့် သည်ဟု ၄င်းက အကြံပြုသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ကလေးသူငယ်များ စမတ်ဖုန်း နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားကို တိုးမြှင့်သုံးစွဲလာကြခြင်းဖြစ်သည်။
Posted on 26/12/2018 Author AuthorCategories ဆောင်းပါးLeaveacomment on ဗဟုသုတ
၂၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထုတ် မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာပါ
☺ သွားတော့ – – –
ဆီးကြိုလက်ကမ်းပွေ့ဖက်မယ် ။ ။
၁။ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ အမှိုက်သိမ်းသံကန် (Tank Carrier) များ ၀ယ်ယူလိုပါသည်။
၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမှိုက်သိမ်း သံကန် (Tank Carrier)များ တင်သွင်းရောင်းချလိုသူ များမှ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာ – ၁၅-၁-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)
(ခ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် – ၂၆-၂-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)
(ဂ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဆောင်ရွက်မည့်နေ့ – ၂၇-၂-၂၀၁၉(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
(ဃ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဆောင်ရွက်မည့်နေရာ- မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၃။ အထက်ပါတင်ဒါပုံစံများကို တစ်စုံလျှင်ကျပ် ၅၀၀၀/-နှုန်းဖြင့် ရုံးချိန်အတွင်း သန့်ရှင်းရေး ဌာန(နန်းရှေ့ဈေးအပေါ်ထပ်)တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ (အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိ လိုပါက ဖုန်း-၀၂-၄၀၇၂၀၀၃)သို့ စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Posted on 26/12/2018 Author AuthorCategories ကြော်ငြာLeaveacomment on အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
စုပေါင်းညီညာ မန္တလာ ။
ဘေးကင်းချမ်းအေး မန္တလေး ။
မြို့တော်စည်ပင် စေတနာ ။ ။
Posted on 24/12/2018 Author AuthorCategories ကဗျာLeaveacomment on ကဗျာ
Posted on 24/12/2018 Author AuthorCategories ဆောင်းပါးLeaveacomment on ဆောင်းပါး
Posted on 24/12/2018 24/12/2018 Author AuthorCategories ဆောင်းပါးLeaveacomment on ဗဟုသုတ
၂၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာမှ
☺ အရှေ့လားသော် . . .
မငြီးလှအောင်၊ ရန်ကင်းတောင်တည့် ။
☺ အနောက်လားသော် . . .
မြို့တော်စည်ပင်၊ ကြီးပွားသွင်တည့် ။
☺ တောင်သို့လားသော် . . .
ကြီးမားမဟာ ၊ မြတ်စွာမုနိ
တုမရှိဗုဒ္ဓ၊ သပ္ပာယ်လှတည့် ။
☺ မြောက်သို့လားသော် . . .
ခံ့ညားထည်ဝါ ၊ သံဃာတော်များ
သင်ကြားစာတိုက် ၊ ကျောင်းတော်တိုက်တည့် ၊
☺ နန်းဦးလွင်အား ၊ ဗဟိုထား၍
သွားလာဝင်ထွက် ၊ နေ့စဉ်ရက်ဆက်
ဆုံရလေသော် ၊ မနေမနား
ကြိုးစားဝိပဿနာ ၊ အားထုတ်ကာဖြင့်
စိတ်မှာဆန္ဒပြင်းပြတကား . . . . . ။
Posted on 23/11/2018 Author Swe HtikeCategories ကဗျာLeaveacomment on ကဗျာ
20-11-2018 ရက်နေ့ထုတ် မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာပါ အကြောင်းအရာ
နဂါးငွေ့တန်း ကြယ်အစုအဝေးကြီးအတွင်း၌ ဒြပ်ထုမည်းရှိနေသည်ကို ဥရာပအာကာသပညာရှင်များ
သက်သေပြနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်ဟု မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေသော အာကာသ ရူပဗေဒဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြသည်။ ဥရောပအာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့က လွှတ်တင်ထားသော ဂိုင်ရာဂြိုဟ်တုမှတစ်ဆင့် စူးစမ်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ အာကာသပညာရှင်အများစု စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသော ဒြပ်ထုမည်းရှိနိုင်မည်ဟု စပိန်နိုင်ငံမှ အာကာသပညာရှင်တစ်စုက အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ၄င်းတို့သည် အာကာသဟင်းလင်းထဲ၌ အီလက်ထရွန်ထက် အဆပေါင်း သန်း၅၀၀မျှ ပိုမိုပေါ့ပါးသော အဇီယွန်များကို ထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် အဇီယွန်များနှင့် ဒြပ်ထုမည်း ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း အခြားပညာရှင်များနှင့် ပူးတွဲစူးစမ်းလေ့လာကာ သက်သေပြခဲ့ကြပြန်သည်။ ဥရောပအာကာသသိပံ္ပပညာရှင်များ၏ အလိုအရ နဂါးငွေ့တန်း ကြယ်အစုအဝေးကြီးအတွင်း၌ ဒြပ်ထုမည်း မုန်တိုင်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် မိုင် ၃၀၀ အမြန်နှုန်းဖြင့် ဝှေ့ရမ်းတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်ဟု ဖီးဇစ်ကယ်ရီဗျူးဒီ ဂျာနယ်၌ ဖော်ပြသည်။ (MT)
Posted on 20/11/2018 Author Swe HtikeCategories ဆောင်းပါးLeaveacomment on ဗဟုသုတ
၁၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာတွင်ပါရှိသော ကျန်းမားရေးဆောင်းပါးမှ
ရေနွေးဖြင့် တစ်နာရီကြာ ရေချိုးလျှင် သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ် လျော့ကျစေမည်
ရေနွေးဖြင့် တစ်နာရီကြာမျှစိမ်ပြီး ရေချိုးလျှင် သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေသည်ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ မကြာသေးမီက ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၃၈ ဒီဂရီ အပူပေးထားသော ရေနွေးကန်ထဲတွင် စိမ်ချိုးခြင်းကြောင့် ၁၅မိနစ်လျှင်တစ်ကြိမ် နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးဖိအားနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အပူချိန် ပြောင်းလဲလာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ဦးဆောင်သုတေသီ ပါရဂူဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား ဟုတ်စထရာက ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ရေနွေးကန်ထဲ၌ နားနား နေနေ ရေချိုးနေစဉ်အတွင်း ရေချိုးသူ၏ သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်လျော့ကျသွားသည်မှာလည်း ထူးခြားကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အပတ်က ထုတ်ဝေသော အသုံးချ ဇီဝကမ္မဗေဒဂျာနယ်တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။
Posted on 19/11/2018 19/11/2018 Author Swe HtikeCategories ကျန်းမာရေးLeaveacomment on ကျန်းမာရေး